တစ်ဖက်သတ် အချစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တစ်ဖက်သတ် အချစ်
Posted by ဇီဇီ on Mar 29, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 83 comments
“ကိုယ်က ချစ်နေရရုံနဲ့ ကျေနပ်တယ်”
တစ်ခါတစ်ခါ သူ့အချစ် နှမ်းတစ်စေ့လောက်ကို လက်ဖျစ်တစ်တွက်လောက် ရလိုမှုရဲ့ အပူကို ဘယ်သူ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါသလဲ။
“စွန့်လွှတ်တဲ့ အချစ်က မြတ်တယ်”
ပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ်ကို အခြေခံပြီး ဖြစ်တည်လာတဲ့ အချစ်တစ်ခုကို မရနိုင်တော့မှ စွန့်လွှတ်ဖို့ စဉ်းစားရတဲ့ ကြေကွဲမှုကို ဘယ်သူ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါသလဲ။
တုံ့ပြန်မှုမရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခုအတွက် ပေးခဲ့၊ ပေးနေ၊ ပေးဦးမဲ့ စေတနာနဲ့ အနစ်နာခံမှုတွေကို ဘယ်သူ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါသလဲ။
“မင်း အနား ရှိရုံ နေခွင့်ပြုပါ”
ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရတော့တဲ့ လူအနားနေပြီး အဲ့ဒီ လူကို လွမ်းနေရတဲ့ အလွမ်းမျိုး ဘယ်သူ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါသလဲ။
“ချစ်ရသူ ပျော်တာမြင်ရရုံနဲ့ နေပျော်ပါတယ်”
သူ့ပျော်ရွှင်မှုက ကိုယ့်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို စောင့်ကြည့်နေနိုင်တဲ့ စိတ်လေးကို ဘယ်သူ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါသလဲ။
ဒီ ကမ္ဘာမှာ သူ့ကို ချစ်နေသော ကိုယ်တစ်ယောက် ရှိနေမှန်း မေ့လျော့နေတတ်တဲ့ သူ့ကို ငေးနေရတဲ့ နာကျင်မှုကို ဘယ်သူ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါသလဲ။
One-sided Love တဲ့…
တစ်ဖက်သတ် အချစ် ပေါ့…
ပေးလိုက်တဲ့ အချစ်နဲ့ ပြန်ရတဲ့ အချစ်မှာ လုံးမမညီမျှတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို တစ်ဖက်သတ်အချစ်လို့ ခေါ်ပါသလား…..။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ အသွားအပြန်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ စကားကို အသုံးချခွင့်မရတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို တစ်ဖက်သတ်အချစ်လို့ ခေါ်ပါသလား…..။
ကိုယ် ယုံကြည်တဲ့ ချစ်ခြင်းမှာ မသက်ဝင်တဲ့သူကို မျှော်လင့်ရတာ တစ်ဖက်သတ်အချစ်လို့ ခေါ်ပါသလား…..။
မမှီမကမ်း သီဝရီတစ်ခု ကို…
ဝန်ခံချက်။ ။ ကိုယ်တွေ့ လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်း။ ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကြားရတာတွေ ခံစားပြီး ရေးထားကြောင်း။
အောင်ကြူးကဗျာဖတ်ပြီး ဝက်သားမျှစ်ချဉ်ဟင်း စားချင်လာပြီ။
လေးပေါက် ပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ။
ပြီးတော့မှ အားလုံးလန့်သွားအောင် အော်မယ်။
“ဟောဒီက သင်္ဘောသီးသုပ် ချဉ်/ငံ/စပ် ရမယ်!!!!!!!!!!!!!!!!!” လို့….
တစ်ဖက်သတ် အချစ် ..
တစ်ဖက်သတ် အချစ် ….
မမခိုင်ဇာ ရေ …
အဲ့ဒီ အချစ် ရင်ကို နင့်စေတယ် …
ဟိုဘက်နားက မထွက်နိုင်တော့လည်း ဒီလိုပဲပေါ့။
ကျုပ်ကိုကလည်း စိတ်ခံစားချက် ခံနိုင်ရည် နည်းပါးပါတယ်အေ။
အသက်မက ချစ်တာ ခတ်လှတယ်
အမြဲ စွဲကာနေသူမယ် မခွဲဘဲ သူ့ကိုမျှော်ကာရွယ်။)
ကိုယ်တွေ့ လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ်ပါ၊ အဆိုတော် ကိုမြကြီးရဲ့ သီချင်းစာသား တစ်ချို့ …………။
ကောင်မလေးကို ကြိုက်တာလဲ တပိုင်းသေနေပီ….
နေ့ တိုင်း ဘက်စ်ကားဂိတ်မှာ သွားစောင့် သူ့ နောက်လိုက် (စကားလိုက်ပြောတာမဟုတ်ဖူး… ဒီအတိုင်းကြီးကို နောက်က လိုက်လျှောက်နေတာ….)
ဇွဲကတော့ ဘာကောင်းလဲ မမေးနဲ့ခြောက်လလောက် အဲ့အတိုင်းပဲ……
အဲ့ဒါ ဟိုက မသိပဲနေမလား သိတာပေါ့….. လိုက်ပြောဆိုတော့လည်း ပြောရဲဖူး……
နာမည်သိလား ရီးစားစာရေးပေးမယ်ဆိုတော့လည်း ပေးရဲဖူးတဲ့… (နောက်မှ သိရတာက နာမည်ကို မသိသေးတာတဲ့ အသေအချာ…………….)
ဒါပေမယ့် ဆရာသမားက မပေးပဲသိမ်းထားတဲ့ ရီးစားစာတော့ များသား……..
စာသားလေးတွေကညွန့် လို…. မပေးရဲတာ တခုပဲရှိတယ်……
အဲ့လို တဖက်သက်အချစ်များဆိုလို့ ကတော့ လေတယ်ကွယ်……..
ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဆင်ပြေသွားပါပီ…..
ဘယ်လို အဆင်ပြေသွားလဲတော့ လာမမေးနဲ့ …. အဲ့ဒါ ၀တ္တုတို တပုဒ်စာရေးလို့ ရတယ်…..
အဲဒါမျိုးများ ရေးပါလား တိမ်မည်းရယ်။
အတုယူချင်တဲ့ သူတွေ ယူလို့ရတာပေါ့။
ဇွဲဆု ရသွားတဲ့ သဘောများလားကွယ်။
ဒီလို ဒီလို အဆင်ပြေသွားပီ ဆိုတာက ဟိုကောင်မလေးက ချစ်ချစ် တယောက် ရသွားပီ…..
ကျွန်တော့်ကောင်ကလည်း နောက်တယောက် ပြောင်းကြံနေတာကိုပြောတာ…..
အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့ ကွယ်… ဟီးဟီး…….
ရှိဝူးရယ်…. တကယ်တမ်းကလည်း အဲ့တယောက်ကို လိုက်နေတုန်းက ကျွန်တော်အဝေးရောက်နေတာလည်း ပါတယ်…. တခြား သူငယ်ချင်းတွေ လည်း ၀ိုင်းပြောကြပါတယ်…. အရာမထင်ဖူးကွယ်……
ကျောင်းတုန်းက တခါ အဲ့ဒီလိုပဲ နာမည်မသိ မေဂျာမသိ ကောင်မလေး တယောက်ကို လိုက်ဖူးတယ်…. ကိုယ်ကလည်း ဘေးနားမှာ ရှိနေတော့ စိတ်မရှည်ဖူးရယ်….
နဲနဲ အထွန့် တက်ပီး လိုက်ကျောင်းပေးလိုက်တာ… မြှားဦးက ကိုယ့်ဘက် လှည့်လာလို့မနဲ ရှောင်လိုက်ရတယ်……..
အခုတော့ နောင်တရသလိုတော့ အဖြစ်သား… အဟိ…
စခန်းရောက်တော့ နှစ်ဖက်မိဘက ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့
၀တ္တုနာမယ် ရဲစခန်းဖူးစာ တဲ့။
ကောင်းလိုက်တဲ့ အိုင်ဒီယာလေး မှတ်ထားဦးမှ……
ဒီလူ ဗမာပြည်မှာမွေးတာ တော်တော်ကံကောင်းတယ်။ တစ်ခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင် အနဲဆုံးတော့ ရဲစခန်းခေါ်သွားပြီး အမေးအမြန်းခံရမှာ။
Stalking လို့ပဲပြောမလား။ :harr:
သူလည်း သူ့ နည်း သူ့ ဟန်မို့ လိုသာရယ်…..
နည်းလမ်းများမဟန်လို့ ကတော့ အနားမှာ ခနတာ သွားပီး နာမည်မေးမိရင်တောင်….
အချုပ်ကို ဖရီး ရောက်သွားနိုင်တယ်….
အခြစ်ဆိုဒါ မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်နဲ့ တူသဒဲ့ ..ကံဆိုးတဲ့သူမှ တေ့နိုင်တာတဲ့ ..
ကျနော်ဒဂယ်ယီး ကံဆိုးခဲ့တာလား ဒဲ့ ..
ဆြာယီး မျတန်းတင့် လား … ဥက္ကလာတာယာ လား ဆြာယီး တယောက်ယောက်ပေါ့ဗျာ
အဲ့လို ပြောသွားသလားပဲ ဗျာ.. ဥာဏ်မမီပါဘု
အချစ်အကြောင်းဆိုတာ သရဲ အကြောင်းလိုပဲ တဲ့။
လူပြောများနေကြပြီး သေချာသိမြင်ဖူးသလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဖူး တဲ့။
ဆိုတော့ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောကြတာပါပဲလေ။
( သို့သော် ) အပြစ်မမြင်
ကဗျာလေး အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို မျိုးသန့်။
It is nice and true.
မင်းရင်ခွင်နဲ့ ခွဲခွာနေဖို့ မရဲပါဘူး….
(အပြစ်မမြင် – ၀ိုင်းစုမျိုးသန့် အဲ…မှားလို့ဗျာ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း :harr: )
အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်၊ သူ့ဝန်ထုပ်ကြီးကို ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပြီး
အချိန်က မှေးမှိန်အောင် လုပ်မပေးနိုင်ခင် အထိ
စိတ်ထဲထည့် သယ်သွားရမဲ့ အချစ်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။
အိမ်ထောင်မကျခင်သာ အရသာခံပြောလို့ကောင်းတဲ့ စကားလုံးပါဗျာ။
တကယ်လဲ အိမ်ထောင်ကျပြီးရော ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရောထွေးပြီး
အချစ်ကို တခုတ်တရ မပြောနိုင်တော့ပါဘူး
အဲ ဒီ တော့ ဒီ “အချစ်” ဆိုတာ တပြောတည်း ပြောနေတဲ့ လူတွေကို ထောင်ချ လိုက်ရင် ကောင်းမယ်။
မိန်းကလေးဘက်က ချစ်တာကို အရေးလည်းမစိုက်တော့ စိတ်နာတယ်..ရှင်လေ တန်ဖိုးမထားတာတွေ…ကြာလာလေ ပိုသိလာ…ပေးမိတဲ့အချစ်တွေကို တစ်ချက်လောက် ဂရုစိုက်လာရင်…၀မ်းနည်းအောင်အမြဲလုပ်ခဲ့တာတွေ..ကိုယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်…
မနေ့ကအထိ မင်းရဲ့အချစ်မျှော်လင့်မိတယ်… မင်းကမသိ တစ်ချက်မှ မကြည့်တာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..ဝေဒနာတွေပဲ ဆက်တိုက်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ..ကြောက်မိခဲ့ပြီချစ်သူ..တို့မိန်းကလေးပါ…
မဆုံနိုင်တာဒွေ လည်း ဒု နဲ့ ဒေး ရှိတယ်ဆိုတာ..
မဆုံနိုင်တာဒွေ လည်း ဒု နဲ့ ဒေး ရှိတယ်ဆိုတာ..)
အနာကို တုတ်နဲ့ ရိုက်သလို လာပြောနေတယ်။
အနာကို တုတ်နဲ့လာရိုက်တဲ့ အမတ်ကို တုတ်နဲ့ ပြန်ရိုက်လိုက်ပါ ဆွိရေ။
လွှတ်တော်မတက်တဲ့ အမတ်ဆိုပြီးတော့ အကြောင်းပြလိုက်ပေ့ါ။ :harr:
လူကြိုက်များပြီး မစွံတဲ့ အပြစ်နဲ့
ဘာကြိမ်လုံးဆိုလား.. အဲ့ဒါဆို မဆိုးဘူးရယ်..
နှစ်ဖက်လုံး အလွယ်တကူ မဆုံနိုင်ရင် ဆုံအောင်လုပ်ပေးမယ့်
ဟိုတခါပြောထားတဲ့ ပွဲစားလုပ်ငန်း စပြီလားဟင်။
ကျုပ် ရဲ့ အချစ်ပို့(စ) မှာ လေးပေါက်ကြီး လာစည်းရုံးနေပါ့လား။
ကာစတန်မာရရင် ပို့(စ) ပိုင်ရှင်ကို ကော်မရှင်ပေးပါဦးနော်။
ငါနဲ့ မင်းနဲ့ အိုမျဉ်းနှစ်ကြောင်းလို
အဝေး အဝေး ကပဲချစ်နေမယ်
မင်းပျော်နေရင် အမြဲ ငါကြည်နူးတယ်
အားလုံးထက် မင်းကို ချစ်နိုင်တယ်
ဒီလိုတစ်ယောက်ထဲ ရူးသွပ်တဲ့နေ့များ သူကသိမှာလား
မန့်ချက်။ ကိုယ်တွေ့ လုံးဝ ဝလုံး မဟုတ်ကြောင်း။ ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖတ်ရတာတွေ ခံစားပြီး သီချင်းစာသား အပိုင်းအစများ
မင်း ကို ပြန်ချစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက် အနေနဲ့ မချစ်နိုင်စရာ ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုမှ ချစ်လို့မရဘူးကွာ။
အနော်လည်း မခိုင်ကြီး သီချင်း ဆိုပြတာနော်။
တူမကြီးရေ ဦးကြီးလည်း မျိုးဘူးကြီး သီချင်းကို ဆိုပြတာနော်။
rap လေး ရွတ်မယ်နော်..
အိပ်မက်ထဲပြောနေပြီး အပြင်မှာကျတော့ တစ်ခြားစီပါလား…မိန်းကလေးအတွက် ဟားရီစရာလား..၀န်ခံပါတယ်..အချစ်စိတ်က ရှင်သန်လာတယ်.. ပိုပြီးတော့ လျင်မြန်လာမယ်…ဘယ်တော့များပြောထွက်မှာလဲ…မင်းရဲ့ဘက်က မသိနိုင်တော့လို့..မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်နေတာမို့…ရင်ထဲမှာ အချစ်တွေကဆို့…ဒါတောင်မှ မင်းရဲ့ဘက်က စိတ်ကူးယဉ်လို့ ကောင်းနေတုန်းလား…မင်းအတွက်နဲ့ ရင်မောလိုက်တာ..မချစ်ဘူးဆိုရင် ပြောလိုက်ပါ…ငါ့ကိုလည်း မချစ်ဘူးဆိုရင် နင့်ပါးစပ်က ဖွင့်ပြောလိုက်ပါ…မသိစိတ်က အဖြူရောင်တွေကို ဆိုးနေမိပြီ နင်နဲ့ငါနဲ့..ပြောမထွက်တဲ့ စကားလုံးတွေက ရင်ထဲမှာထည့်..ယောက်ျားလေးဖြစ်လိုက်ချင်တယ်…နင့်နေရာ ၀င်လိုက်ပြီးတော့ ဖြစ်လိုက်ချင်တယ်… နင့်ကိုလေ အရမ်းချစ်တယ်လို့ ဖွင့်ပြောပြီးတော့ ချစ်လိုက်ချင်တယ်…
တစ်သက်လုံးဆိုခဲ့ရတဲ့ သီချင်းနော်… ငိုပလိုက်မှာ..
ဟယ်။ ရွာ ထဲက အဆိုကျော်တွေပါလား။
rap သီချင်းဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်….rap သီချင်းဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်rap သီချင်းဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်…
rap သီချင်းဆို….ရင်…လုံး…….၀…….မကြိုက်။ :hee: :hee:
ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရတော့တဲ့ လူအနားနေပြီး အဲ့ဒီ လူကို လွမ်းနေရတဲ့ အလွမ်းမျိုး ဘယ်သူ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါသလဲ။
>>>> မီးမီး ကိုယ်ချင်းချာပါတယ်..။ ကိုယ်ဂျင်းရှာ နာ ခဲ့ ရ ဘီ လေ..။ ကိုယ် ဂျင်း ရှာ နာခဲ့ရဘီ..။
နာ့ ကို တော့ဟုတ်ဘူးနော်။
နာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်နော်။ ခြည်ခြည်
ကိုယ့်ဘ၀ကို စွန့်သွားတော့ နေခြည်..ကိုယ့်အနားကို မင်းလေး မလာနဲ့တော့။
ဆောရီးပါ…ဒီနေ့ ပဲဟင်းစားတာများသွားလို့..တလုံး လည်လိုက်မိတယ်။
အဲဒါကြောင့် အနားမလာခိုင်းတာပါ။ :harr:
အဲလာ ကျုပ် ကောင်မလေး။
မီးပါတော့ ဆိုမယ်ကွာ ငါလဲ ငါရတဲ့သီချင်းဆိုမယ်
အဲတော်..ကေဇီရယ်….ယု ကောင်မလေးကို ထိရဲပါဘူးတော်
ကျုပ်ကတော့ နှစ်ဖက် နဲ့ အားရစွာ ဖက်ပြီး ချစ်ချင်တာကလား
ကပေ က တော့ လေ။
go ahead KZ, it doesn’t matter whether it’s base on true story or what you heard.
I am willing to consult this kind of love affair with my friends. If he wins her heart I get one table, if he loses, I get Whiskey in return of consultant fee.
ကျွန်မကို ချိဒယ် ပျော့စ်ဘာဒေါ့ကွီ
ရှင် ဘာဂျောင်းများ နှောင့်နှေးနေယဲ
ဒဂယ်ချိုလျှင် ကျွန်မ ချကားယေး နားထောင်ဒေါ့ ..
ရှင့်ကို ချိတယ် ကြားရဲ့ လား ကွီ …နောက်တထောက် ထပ်ကြောမယ်
အသီးလေး ကျွန်မပေးမယ် … ဂယ်ချိုရင် ရှင် ယောက်ကျား ဟုတ်ဝူးးးးးးးး
ဒီမှာ အိပ်မက်တွေ .. မက်ဟပ်ဟပ်ဟပ်…. ရေးးးးး
သူများတွေလို သီချင်း ဆိုပစ်လိုက်တာ … ခိခိ … မမခိုင်ဇာရေ … တဖက်သတ်ဆိုတဲ့ ဖီလင်မျိုးက ….အောင့်သီးအောင့်သက်နဲ့ အတော့်ကို စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အနေထားမျိုး …ဒါပေမယ့်လည်း … နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ချိပါတယ်ပေါဘီး … သတ်နေကြတာ ထက် စာလျှင်တော့…နည်းနည်း ပိုကောင်းမလားပဲ ….. ။ ဒီတော့လေ … ခေတ်တွေလည်း ပြောင်းကုန်ပါပြီ … အဟဲ … နီ နာ့ကို ကြိုက်လား ကြိုက်ဝူးလား တည့်တည့် တွားမေးလိုက်… ခိခိ … ။ ကြိုက်ဖူးဆိုလည်း အရင်းပေါ့ … ခိခိ …
(နောက်တာပါ မမခိုင်ဇာရေ … ကိုယ်က ပေါတောတောရေးပေမယ့် …တချို့ ချို့သော လူတွေက ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်ပြီး …….တော်ကြာ Etone ပြောလို့ ခေတ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလျှင် သမိုင်း တရား ခံ ဖြစ်နေတော့မယ် ဘာညာ ပြောခံနေရဦးမယ် …တခါ ပြောခံရဖူးတယ် .. ဟွင်းးးး )
ဆိုတာကတော့ … give & take ပုံစံမျိုးရီးဖြစ်တွားဘီ … ကိုယ်ကချိနေရတာနဲ့ ကျေနပ်ပြီး ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ထားလျှင် ဘီလောက် အေးချမ်းလိုက်မလဲ … ခိခိ …. ။ကံမကောင်းရင် တသက်လုံး အပိုရီးဖြစ်မယ် ။
စာနီကြီး ဖတ်ပြီးတော့မှ …. ထင်ချင်သလိုလို ဖြစ်တွားဘီ …. ။
အဲဒီအနီ စာလုံးက ဂယ်ပြောထားတာနော်။
ခုမှ တဖွတ်သတ်အချိ လေးကို အငှါး ခံစားခါစ ရှိသေး။
ဒါကြောင့် လား ပေါင်းများစွာနဲ့ မေးထားမိတာပါ။ ခွိခွိ
ကံမကောင်းရင် တသက်လုံး အပိုရီးဖြစ်မယ် ။ ညည်းအဲလိုပြောတော့
ညည်အပိုကြီးဖြစ်ချင်ပေမယ် သူက လူပိုကြီးဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့အေ့
သေချာတာ ချစ်ရင်ချစ်တယ် မုန်းရင်မုန်းတယ် အဲ့ဒါရှင်းတယ်
ပျော်ပျော်နေအေးတယ် ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်အေးတယ်… အဲ.. ဆက်ဆိုတတ်တော့ဘူးးး မမခိုင်ဇာဆိုပြ ….
အဲဒီ သီချင်း ဆိုတတ်ဘူးဗျ။
နောက်ပြီး ဒီ သီချင်း ကို မမ ကို မဆိုပြနဲ့။။
ဟို လူဂျီး ကို ဆိုပြလိုက်။
ဆိုပြလိုက်ပီ သိလားမမခိုင်ဇာ အိုက်လူဂျီးက ပြောတယ် သူ့ကိုဆိုပြနဲ့တဲ့ ဟို ဂျီးဒေါ်ကို ဆိုပြလိုက်တဲ့
နာ က ဘယ်လူဂျီးကိုပြောပြီး ဗုံ က ဘယ်လူဂျီးကို သွားဆိုပြတာဘာလိမ့်။
သေချာတာ နှစ်ယောက်လုံးက တနင်္ဂနွေသားဗျာ
ရှေ့မှာ အ ပါတယ်
ဘာဘာ ဘာမှ အတိဝူး (စီဒီ- ဦးဆာ)
ဟာ ထိတယ်ကွာ ဖေပေါက်ကြီး ရမ်းပစ်ချက်ကတော့ကွာ ဒုတ်ဒုတ်ထိဘဲကွာ :harr: :harr: :harr:
တစ်ဖက်သတ်ကနေ နှစ်ဖက်ညီ ဖြစ်ချင်သူချည်း
လူတွေဟာ အတ္တနဲ့ နေကြတာပါကွယ်…………………………
ဒီ စကားတွေကို ကိုယ့် သူငယ်ချင်း ကို ပြောသင့်တယ် သကြားရယ်။
မရရအောင်.. မရရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ရအောင်
ယူစေချင်တယ်…။ (ကိုယ့်တုန်းက မရခဲ့တာကိုး.. ဟီးးး )
တားကတော့ ကိုယ်ချစ်ကို မမက်တော့ပါဘူး..
မကြီးဇာမှာ တူမလေး.. ညီမ၀မ်းကွဲလေး.. ဘာလေးညာလေးများ
ရှိသေးရားဟင်.. ဂေါင်ထိအောင် ပစ်ချင်လို့ဘာ..
တော့!!! ကရင်စည် …….!!!
ကျုပ်က ကျုပ်ကြိုက်ရင် ရ ရမှ။
ကျုပ် ညလေး၊ တူမလေးတွေက ဒီ ရွာမှာ တစ်ပုံကြီးပဲ ကြိုက်ရာပြော။
ရှိသလောက်ရှာရရင်လည်း ဒီရွာထဲ က ကျုပ်မောင် ၂ ယောက်နောက်က ကိုရင် တန်းစီရဦးမယ်…
ကျုပ် မွေးမယ်ဆိုရင်လည်း သမီးလေးအထိလည်း တန်းစီထားတဲ့လူရှိပြီးသားတော့။
မှတ်ကရော။ ဂေါင် ပစ် ချင်ဦး။
ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် =)
ချစ် ချစ် ချစ်ကြရမှာပါပဲ လေ
ဒီနေရာမှာ ပြောလိုတာက ပွဲတိုင်းကျော်တဲ့ စစ်သူရဲတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်
ဥုံ ……… ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် စိတ်မညစ်နဲ့ ရဲဘော် ဆက်လုပ်
အင်း … ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုဂျီးတော့
မအောင်မြင်ဘဲ ရှိမလားဗျာ ..
ဒဂယ့် ဂရိတ်ကြီးတွေကို မှီဝဲဆည်းကပ်ထားတာကိုး ခင်ဗျ ..
:byee: ဘေယောင်ဂျွန်းလေးကိုချစ်မိတဲ့အချစ်က ဘယ်လိုအချစ်မျိုးဖြစ်မှာပါလိမ့်။ :byee:
ဂျွန်း မသိ အချစ်
အချစ် = ကျနော့် မသိခြင်း
မသိတာ ပဲ ကောင်းးးပါတယ် ကွိ
ဟိဟိ.. အတိတ်တွေက ပြန်ဖတ်တော့လည်း ရယ်ချင်စရာကြီး…
အဲ.. ကဗျာကိုပြောတာ ဟုတ်ဘူးနော်..
အဲ့ တုန်းးး ကတော့ရေလည် ခံစားးးရတယ်နော်
သူ မပါတဲ့ ဘွမှာ နေတတ်ဖို့ အရေးးးကြီးးးး